nmn & nr tayada wax soo saarka budada hplc = 98% | Tayada AASraw
Soosaar alaabada ugu sareysa, soo qaado tan ugu fiican.
AASraw waxay leedahay nidaam kontorool tayo oo dhammaystiran oo loogu talagalay SOP (Nidaamka Hawlgalka Heerka). Hawlgallada oo dhan waa la duubayaa, la socon karaa, oo ay weheliyaan jawaab celinta / faallooyinka iyo nidaamka soo celinta. Maamulka ku saabsan Tijaabinta, Beddelidda, Wax ka beddelka iyo halista ayaa ah nidaam deegaan oo dhan oo loogu talagalay soosaarka budada cayriin. Muddo sanado ah, alaabta ceyriinka ah waxay la jirtaa 100% tayo wanaagsan, taas oo naga caawinaysa inaan ku dhisno sumcad sharaf leh warshadan.
Marka laga soo tago qawaaniinta maareynta adag ee SOP, qalabka la xiriira wuxuu gacan ka geysan doonaa xakameynta nidaamka, tijaabinta alaabada, sida mashiinka HPLC (chromatography dareere sare), Mashiinka chromatography gaaska, LC / MS (Liquid chromatography – mass spectrometry), iwm. Sidoo kale, kooxdayada R & D waxay si adag uga shaqeeyaan kaydka tikniyoolajiyadda iyo hubinta, oo ay ku jiraan kala-soocidda nijaasta, falanqaynta, raad-raaca, iwm. Qalabka ay leeyihiin iyo gorfaynta waxaa ka mid ah:
UV-muuqaalka muuqaalka muuqaalka. Bruker Tensor 27
–80 ° C, 10 Liter Weel Research (R&D)
–80 ° C, 500Liter Weel loogu talagalay soosaarida kiilo iyo Teknoolajiyad la hagaajiyay
-80 ° C, 2000Liter soo saarida dalabka badan
100 bar, 100mL ~ 1L Maraakiibta Maraakiibta （R&D）
100 bar, 20L ~ 50L Maraakiibta maraakiibta kilo iyo soosaarida Tech ayaa la hagaajiyay
100 bar, 1000L ~ 5000L Maraakiib soo saarida Amarka Jumlada